Umthandazo wokuqalisa usuku Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kule nqaku siza kukunika ezinye Imithandazo yokuqalisa usuku, njengendlela egqibeleleyo yokufezekisa uxolo kwaye unamandla afanelekileyo okujongana nemisebenzi yakho yemihla ngemihla ngentsikelelo kunye nokukhuselwa nguThixo.
Imvakwemini yokuqala ntsasa nganye kufuneka ibe kukubulela uThixo ngemini entsha, ukuqala kunyawo lwasekunene
1 Imithandazo yokuqalisa usuku, ngokhuseleko lukaThixo.
2 Imithandazo yokuqalisa usuku
2.1 Umthandazo wokusikelela intsasa
2.2 Umthandazo ngaphambi kokuya emsebenzini
2.3 Umthandazo wasekuseni wokuthandaza nabantwana
2.4 Umthandazo wokubulela usuku olutsha
3 Isiqhelo sokuqala usuku kunye nobungcwele.
Imithandazo yokuqalisa usuku, ngokhuseleko lukaThixo.
Umthandazo wokuqala esiwenzayo xa sivuka sisixhobo esidala kakhulu esisisebenzisa ukugcina unxibelelwano noThixo kwaye sifumana kuye amandla afanelekileyo okuqala ukwenza imisebenzi yethu yemihla ngemihla, njengoko yenzayo iNkosi yethu uYesu, owayehamba ayokuthandaza ntsasa nganye. ujonge ukukhuselwa kunye nentsikelelo kaBawo.
Ke ngoko, ndiyakumema ukuba uvuke rhoqo kusasa, ube nencoko emfutshane noThixo kwaye wenze into entle Imithandazo yokuqalisa usuku, ukuba siza kukubonisa kweli nqaku lingezantsi.
Siyathemba ukuba le mithandazo yokuqalisa usuku, ikunike ukuqhuba kunye novuyo lokuvuka ebhedini, kwaye woyise iphupha, kwaye ngale ndlela unokuyonwabela inkampani kaThixo, oya kuhlala enawe.
Zilungiselele ukuqala usuku ngomthandazo, ubulele ngokholo kwaye ufumane intsikelelo kaThixo ngovuyo kunye nethemba lokuba yonke into oyenzayo iya kuba yenziwe nguThixo. Siyakumema ukuba uphonononge inqaku lethu ku Umthandazo wentsikelelo yosuku
Ndiyabulela kuThixo, kuya kusenza sonwabe
Imithandazo yokuqalisa usuku
Umthandazo wokusikelela intsasa
Ndiyabulela ngale mini intsha,
Kususela ke ngokuzalwa kwelanga, nokuvuka kwam, nokuhamba kwam,
Ndinethuba lokusondela kuwe, ukuba seva elingcono kunangaphambili.
Ndiyabulela ngosapho ondibeke kulo,
kubahlobo bam abo bandikhokelela ngokulungileyo
nayo yonke into ekhokelela kwindlela eya kuwe, emele into elungileyo ebomini bam.
Zukisa ngoMoya wakho oyiNgcwele, Nkosi,
ngalinye lamanyathelo am, ukuba ube ngumzekelo wentliziyo yakho elungileyo
kubo bonke abafumanayo endleleni.
ulwimi lwam, imilebe yomlomo wam kunye nelizwi lam,
ukuze babe ngabakhuseli belizwi lakho nabagqithisi kulo.
Nyibilik 'igazi lakho ezandleni zam,
Bangagcoba bagcine ukuthobela kwakho, ukuze umsebenzi wam ube nentsikelelo.
Ndibeka ezandleni zakho yonke into endiyiyo namhlanje nento endizakuba yiyo,
ukuze undibumbe ngomfanekiso wakho kunye nokuthandwa nguwe,
ukuze bafanane nawe, ngenxa yabantu bakho,
Kwaye ukuze igama lakho lizukiswe kuyo yonke indawo ewela.
Ndicela oku egameni likaYise, unyana, noMoya oyiNgcwele.
Umthandazo ngaphambi kokuya emsebenzini
«Phambi kokuba ndiqale usuku lwam lomsebenzi, ndivula intliziyo yam kuwe, Bawo waseZulwini. Ndicela undikhaphe ngalomhla. Ndigubungele ngoxolo lwakho, inceba yakho, inceba yakho nothando lwakho. Kwaye yonke into eza kum ine-oda yakho egqibeleleyo.
Ndiyakucela ukuba usikelele imibono yam, iinjongo zam nayo yonke into endiyicwangcisileyo. Basikelele abantu abasebenza kuloo ndawo kwaye yonke into ephumayo nangaphandle, yenzelwe ukulunga kwabo balapho.
Umthandazo wasekuseni wokuthandaza nabantwana
Kubalulekile ukuba sifundise eyona incinci indlu ukubaluleka kokubulela, ngakumbi ukubulela usuku olutsha lokuba bayaphila, banekhaya nabazali ababathandayo. Ukuze xa bekhula babe ngamadoda nabafazi abalungileyo abanombulelo ngentsikelelo nganye abayinikiweyo.
«Nkosi, uya kuhlala uyindawo yam yokusabela kunye nokukhuselwa kwam. Ndiphumla phantsi komthunzi wakho kuba ndiyazi ukuba akukho bubi buya kundifikela apho. Yiyo loo nto rhoqo ekuseni ndivuka, kuba iingelosi zakho zingabakhuseli bam kwaye nazo ngesandla, ziya kuyenza imini yam ibe sisipho esihle.
Ndiyakuthemba ngokupheleleyo kuba njengomntwana ndizivumela ukuba ndikhokelwe nguwe nokulunga kwakho. Yenza usuku lwam lube lolona luhle, undikhathalele nosapho lwam.
Umthandazo wokubulela usuku olutsha
«Bawo othandekayo, ngolu suku lutsha ndifuna ukubulela ngokundivumela ukuba ndivule amehlo am kukusa okutsha. Ndijikelezwe ngabathandekayo bam.
Ndiyabulela ngesipho sale ntsasa intsha kwaye ndiyabhengeza egameni lakho elingcwele kakhulu ukuba iyakuba ngumhla woloyiso. Ezele ziintsikelelo kusapho lwam, kum nakubo bonke abantu xa bevuka kuthando lwakho.
Ngale mini ndizishiya ezandleni zakho ndizenze ndifumaneke. Ewe, ndithembe ngokupheleleyo uthando lwakho kwaye ndiyazi ukuba kuyo yonke iyure yolu suku uyakusikhokela usikhusele.
Isiqhelo sokuqala usuku kunye nobungcwele.
Ukuqala kosuku ngalunye kusixelela ukuba uhambo lwethu lwemihla ngemihla luza kuba njani. Ngamanye amaxesha kunzima ukuvuka, kwaye kufuneka sifunde ukoyisa ubuvila bakusasa. Ngesi sizathu, sicebisa ukwenza oku kulandelayo:
Enkosi kwaye unike: Bulela usuku olutsha kwaye wenze umthandazo kuThixo ngazo zonke iintsikelelo oya kuzifumana.
Qalisa usuku luthambile kwaye luzolile: sukungxama, phefumla.
Vuka kwakusasa uyokuthandaza: kunzima ukuqala eli nyathelo, kodwa njengoko uziqhelanisa nalo, uyakuqhela ukuvuka ekuseni kakhulu kwaye wonwabele umthandazo ohamba nekofu emnandi.
Ulungiso lokuqala: Phakama xa ialam isitsho okokuqala. Lo msebenzi ulinyathelo elikhulu, yomelela kwaye uthumele umzimba wakho ukuba uvuke uze utsibe ebhedini.
Okokugqibela, xa siqala usuku ngendlela ezolileyo nangomthandazo, uya kuziva ukhatshwa nguThixo, womelele kwimisebenzi ekufuneka yenziwe, izele ngamandla kunye nomdla. Zama ukuyenza kwaye uza kubona iziphumo, uThixo uya konwaba ngayo yonke into oyenzileyo.